Caafimaadka: Qaadashada Dawada Dhiig-karka oo la ammaanay habeenkii (Akhri daraasad cusub) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Caafimaadka: Qaadashada Dawada Dhiig-karka oo la ammaanay habeenkii (Akhri daraasad cusub)
Caafimaadka: Qaadashada Dawada Dhiig-karka oo la ammaanay habeenkii (Akhri daraasad cusub)
Muqdisho (Halqaran.com) – Daweynta dhiig-karka waxaa wax ku ool u ah dawo qaadashada habeenkii, iyadoo ah mid aad wax tar u leh, gaar ahaan waqtiga jiifka.
Oggaanshaha waqtiga la qaadanayo dawooyinka noocan ah waa muhiim, maxaa yeelay waxa ay hoos u dhigeysaa xaaladda dhiigga 45%.
Ramon Hermida oo katirsan Jaamacadda Vigo ee dalka Spain iyo saaxiibadii ayaa kala qeybiyay 19,000 rag iyo dumar isugu jira, iyagoo u kala qeybiyay 2 kooxood.
Koox waxa ay ka codsadeen in dawada ay qaataan waqtiga jiifka, halka kooxda kalena ay ka codsadeen in dawada ay qaataan marka ay toosaan subaxii.
Mid walba oo kamid Ramon iyo saxiibadii waxa ay billaabeen in ay si joogto ah u kormeeraan xaaladda bukaannada ay dawooyinka ku tijaabinayeen, kormeerkaas ayaa socday qiyaastii 6 sano.
Khubarradu waxa ay ogaadeen in kooxda dawada qaadatay watiga jiifka in uu hoos u dhacay cadaadiska dhiiggooda, halka kuwa qaatay waqtiga subaxiina uusan ka muuqan isbedel micno sameynaya, sidaas darteed 43% hoos ayuu u dhacay cadaadiska dhiigga kuwa dawada qaatay waqtiga jiifka.
Ugu dambeyn, daraasado hore ayaa iyaguna qaba in daawada dhiig-karka ay habboontahay waqtiga jiifka ama xilliga uu bukaanku doonayo inuu seexdo.
Jaamacadda Vigo ee dalka Spain